အိန်အိန်း (Js Crew Leader )ရဲ့ စာမျက်နှာ - မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့
အိန်အိန်း (Js Crew Leader )
အမျိုးသားyangon!မြန်မာ နှစ်သက်တယ် 1 member likes this
ဘလော့ပိုစ့် (1)ဆွေးနွေးချက်တွေ (8)Eventsအဖွဲ့ တွေဓာတ်ပုံတွေ (59)ဓာတ်ပုံ အယ်လ်ဘန်ဗီဒီယို (16) အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) နှစ်သက်တယ် အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) ရဲ့  သူငယ်ချင်းတွေ
အားလုံးကိုကြည့်မယ် အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s Discussions
BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????
(သင်စတင်ခဲ့တာပါ). နောက်ဆုံးပြန်စာ ကို yannaingkyaw ရေးခဲ့ပါတယ်။(အေပရယ်လ 5) 27 Replies
ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ပြောတယ် "ငါက နင့်ရဲ့ BF ပါ"တဲ့။ ကောင်လေးရဲ့အပြောကို နားမလည်တဲ့ ကောင်မလေးက အပြစ်ကင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့မေးတယ်။ "BF ဆိုတာဘာလဲ?" ကောင်လေးက ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်နဲ့ "BF…(ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်)အညွန်း - ဗဟုသုတ အားလုံးကိုကြည့်မယ်
အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) ဟာလောလောဆယ်တော့ လက်ဆောင်တွေ လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျား
Thanks to All of My Fans... :)
ကိုကိုဇင်လင်း liked အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????အေပရယ်လ 5yannaingkyaw replied to အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????"3D မျက်မှန်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပါ
"အေပရယ်လ 5yannaingkyaw replied to အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????"ကောင်းပါတယ်နော်ဘော်ဘော်
ကျေးဇူးနောက်ထပ်ရှိသေးရင်လည်းပို့သေးဦးနော်"အေပရယ်လ 5Yin Min Thu liked အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????နိုဗင်ဘာလ 6, 2013ချစ်သဲရှင် replied to အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????"သူတို့ တွေ ရန်ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ မင်း နဲ့ တွေ့ တာ Big Foul လို့် ပဲ ပြော လိမ့် မယ် ထင်တယ်
"စက်တမ်ဘာလ 14, 2013ခိုင်သော်တာမင်း replied to အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????"မိုက်တယ်...............ကျေးဇူးပါရှင်"သြဂတ်စ်လ 23, 2013အိသက်ခိုင် leftacomment for အိန်အိန်း (Js Crew Leader )"G ye မင်းနဲ့ ချစ်တာ သီချင်းထဲက ကောင်မလေး အမည်ကို သိချင်ရင် ပြောပြမယ် သူ့ အမည်က နန်းသီရိမောင် ပါ မျက်မှန်တပ်ထားရင်တော့ မဆိုးပါဘူး မျက်မှန်မပါရင်တော့ တမျိုးပဲ"သြဂတ်စ်လ 20, 2013violet replied to အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????"ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ မိုက်တော့ မိုက်တယ် နည်းနည်းတော့ပျင်းတယ် ခြုံပြော ရ ရင် လန်းတယ်"သြဂတ်စ်လ 20, 2013ခိုင်သော်တာမင်း leftacomment for အိန်အိန်း (Js Crew Leader )"ကိုအိန်းအိန်း အားပေးနေပါတယ်နော်........။"သြဂတ်စ်လ 2, 2013blackr815 leftacomment for အိန်အိန်း (Js Crew Leader )"အကိုအမြဲအားပေးနေတယ်နော်။သီချင်းအသစ်တွေရှိရင်တင်ပေးအုံး။"ဇွန်လ 18, 2013ဆီ ချက် liked အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????မတ်လ 23, 2013lil' prince liked အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????နိုဗင်ဘာလ 24, 2012Yadanar Leng Kham replied to အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????"He always used to be my Bodyguard and Friend!!!"သြဂတ်စ်လ 21, 2012G ye` leftacomment for အိန်အိန်း (Js Crew Leader )"အိန်အိန်းကိုအားပေးနေပါတယ် မင်းနဲ့ချစ်တာ သီချင်းထဲက ကောင်မလေးနာမည်ကိုလဲ သိချင်ပါတယ်"သြဂတ်စ်လ 13, 2012ဂျက်စတင်းဖိုးတုတ် replied to အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????"ဘာမှန်းမသိဘူး...ဟိဟိ"ဂျူလိုင်လ 28, 2012myo myo replied to အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s discussion BF ဆိုတာက ဘာလဲ ???????????"ကျေးဇူးပါရှင့်---------------"ဂျူလိုင်လ 28, 2012 ထပ်ပြီးတော့ ... RSS
အေပရယ်လ 11, 1988
B.A Myanmar, Musician, Dancer, Director
သင့်ရဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း/သူငယ်ချင်းတွေ
အကအဖွဲ့ ကလေးတစ်ခုထောင်ထားပါတယ် " Js Dance Crew " ....သီချင်းလဲဆိုပြီး ...ဇာတ်ကားတွေလဲရိုက်ထားပါတယ် ....ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြိးကို ကျွန်တော့် အနှပညာနဲ့ အကောင်းဆုံးပေးဆပ်သွားပါမယ် ....
အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ
အိန်အိန်း (Js Crew Leader )၏ဗီဒီယိုများ
Eain Eain - Ou Kyaung Kyar.mp4 အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Eain Eain - Bar Pal Phit Phit.mp4 အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Eain Eain - Shutup(Dubstep).mp4 အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Eain Eain - Dota (3D Animation).mp4 အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Eain Eain - Don't U Know? အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Eain Eain - Shuffle Infection.mp4 အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Eain Eain - Friday Night & Saturday Night အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Eain Eain - A Chit Kyaut.mp4 အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
ကြယ်လေးရယ်ပြောစမ်းပါ အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
အရပ်ပုပုနဲ့ ကောင်မလေး အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်2Comments
ပေးဆပ်မယ့်ဝိညာဉ် အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
ဘ၀စာမျက်နှာ အိန်အိန်း (Js Crew Leader ) စီစဉ်ပါတယ်0Comments
အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s Blog
Posted on ဒီဇင်ဘာလ 21, 2011 at 1:54pm 1 Comment
အချစ်ဟာ ဘ၀အတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပေမဲ့ အချစ်မရှိရင် ဘ၀မှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတွေလည်း ပျောက်ဆုံးကုန်ရော။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် လူတိုင်းမှာ ခံစားချက်ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ထင်မြင်ချက် ကိုယ်စီလည်း ရှိကြပါတယ်။ ကျနော်အခုပြောပြချင်တာက ဘာလို့ ယောကျာ်းလေးမိန်းကလေး တော်တော်များများဟာ ချစ်သူတစ်ဦးတည်းကို တသက်လုံး ဘာလို့မချစ်နိုင်တဲ့အပေါ် သုံးသပ်ကြည့်မိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ။ ဖောက်ပြန်ကြတယ်ဆိုတဲ့အသံတွေကို နေရာတိုင်းမှာကြားနေရတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးကြတဲ့ လူတိုင်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံခဲ့ဖူးတာများပါတယ်။… (ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်) ဘလော့ပိုစ့်တင်မယ်
အားလုံးကိုကြည့်မယ် Comment Wall (14 comments)
At 5:55pm on သြဂတ်စ်လ 20, 2013, အိသက်ခိုင် said… G ye မင်းနဲ့ ချစ်တာ သီချင်းထဲက ကောင်မလေး အမည်ကို သိချင်ရင် ပြောပြမယ် သူ့ အမည်က နန်းသီရိမောင် ပါ မျက်မှန်တပ်ထားရင်တော့ မဆိုးပါဘူး မျက်မှန်မပါရင်တော့ တမျိုးပဲ At 6:02pm on သြဂတ်စ်လ 2, 2013, ခိုင်သော်တာမင်း said… ကိုအိန်းအိန်း အားပေးနေပါတယ်နော်........။ At 8:58pm on ဇွန်လ 18, 2013, blackr815 said… အကိုအမြဲအားပေးနေတယ်နော်။သီချင်းအသစ်တွေရှိရင်တင်ပေးအုံး။ At 12:18am on သြဂတ်စ်လ 13, 2012, G ye` said… အိန်အိန်းကိုအားပေးနေပါတယ် မင်းနဲ့ချစ်တာ သီချင်းထဲက ကောင်မလေးနာမည်ကိုလဲ သိချင်ပါတယ် At 11:06pm on အေပရယ်လ 25, 2012, မိုးစက် said… အိန်းအိန်းရေ....Shuffle infection ဆိုတဲ့သီချင်းကို ကြိုက်ပါတယ်...
ှShuffle ပုံစံ နောက်တစ်ပုဒ်လောက် ဖန်တီးပါဦ..... At 7:15pm on ဒီဇင်ဘာလ 26, 2011, Most_Holy*** said… လာလည်ပါတယ်ဂျာ။ FM သူငယ်ချင်း အိန်အိန်းတစ်ယောက် အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အားလည်းပေးမှာပါ။ At 11:42pm on ဒီဇင်ဘာလ 25, 2011, လွင်မာ said… ဟိုင်းနော်........အ၇မ်းအားပေးနေတယ်သိလား အ၇မ်းလဲကြိုက်ပါတယ်သီချင်းတွေကို............
အားပေးနေပါတယ်အောင်မြင်မူ့တွေ၇ပါစေနော် At 11:20pm on ဒီဇင်ဘာလ 19, 2011, Yan Naung said… ထင်တယ်...ဂျ ဓာတ်ပုံတွေ လက်ခံတော့ ဒီလောက် ခန့် နေရင် မင်းသား ဒါမဟုတ် အဆိုတော် ဖစ်မယ်ထင်တာ....နှစ်ထုလုံးဖစ်နေပါရော့လား...နောင်တော်ရေ့....အနော် အဝေးကိုရောက်နေ လို့ မသိ တာခွင့်လွတ်ပါဗျာ....အခု သိပီပဲ အားးးပေးနေမယ် ဗျ....ကျနော်တို့FM လေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ...
နောင်တော်.... At 11:16am on စက်တမ်ဘာလ 10, 2011, ဆက်ဆက်မြတ်နိုး said… လည်လည်လာပါတယ်နော်................
ပျော်ရွင်ပါစေ........... At 9:32pm on ဂျူလိုင်လ 18, 2011, drogba said… လာလည်ပါတယ်သူငယ်ချင်းရေ.. မှတ်ချက်တွေတော့ မရှိသေးပါ။
အိန်အိန်း (Js Crew Leader )'s MindJolt Games
2. နောင်တစ်ချိန်မှာ နောင်တ ကင်းသောနည်း ၃ နည်း
3. * ည *
4. ***ရှင်=Coffee ခါးခါး***
5. ဘ၀ မှာ ဘာ အရေးကြီးဆုံးလဲ..................???
1. ပျော်ပါစေ ...ချစ်သူ
2. ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မှန်တစ်ချပ်ကို ရိုက်ခွဲလိုက်တော့မည်။
5. ဒီဘဝတော ဒီမျှပါပဲချစ်သူရယ်